Bayern Munich oo xalay markale bah-dishay Arsenal
Home Sports Bayern Munich oo xalay markale bah-dishay Arsenal
Kooxda kubada cagta Bayern Munich ayaa xaqiijisay guul weyn oo ay ka gaartay dhigeeda Arsenal kadib ciyara xiiso badan oo labada kooxood ku dhaxmartay garoonka Alianze Arena.
Bilowga ciyaarta ayaa mid cajiib ah kadib markii kooxda Arsenal ay garoonka laso gashay dardar xoogan iyo weerar an kala joogsi lahen balse waxa dajiyay Ajen Robben oo biyo qabow ku shubay kuleylkii Arsenal laso gashay garoonka kadib marki uu ka dhaliyay gool daqiiqadii 11’aad ee ciyaarta.
Arsenal ayaa marka kadib la timid goolka barbaraha waxana udhaliyay xidiga Alexis Sanchez daqiiqadii 29 kadib rigoore loo dhigay waliba uu soo tufay gool haye Manual Neuer balse markale ku celiyay shabaqada, sidaas ayaana lagu kala nastay qeybti hore ciyaarta.
Marki dib la isugu soo noqday kooxda bafarian-ka ayaa usuurta gashay in ay gabi ahaan la wareegto maamulka ciyaarta waxana gool markale u gacan galiyay xidiga Robert Lewondweski oo kubad ka helay phillipe Lahm.
Kadib sadex daqiiqo goolkaasi xidiga Xabi Alonso ayaa kubad qurux badan u dhaxbixiyay Lewondweski oo isna usi dhigay xidiga Thiago Alcantara oo sidaasi shabaqada ku dhax dhigay goolka sadaxaad ee Bayern Munich.
Daqiiqadii 63’aad ee ciyaarta waxa yimid goolkii afaraad ee ciyaarta waxa markale dhaliyay Alcantara kaib kubad xoog xowli ku socotay uu banaanka diilinta ganaaxa kaso tuugtay iyadoona Ospina uu ku fashilmay in uu celiyo kubadaasi.
Dhamaadki ciyaarta oo ay hal daqiiqo kadhiman tahay waxa goolka shanaad Arsenal ka dhaliyay laacibka Thomas Muller kadib qalad fooxun ay sameyen daafacyada Arsenal.